Raha ny taratasy teny aminy dia tonga teto Madagasikara izy ny 11 mars 2020, avy any Kenya, ary ny 18 mars no nigadona teto Antsohihy, dia maka sary aty ambanivohitry ny Kaominina Befotaka-Nord izy.
Tonga taty Befotaka-Nord ny talata 25 marsa ny chef de centre de surveillance biologique de référence (CSD-R) nanao prélèvement an'i Delmas Joseph Anthony, ka afaka 72ora vao mivoaka ny valin'ny fitiliana, ka raha hita porofo fa misy ny aretina izy dia atoka-monina sy araha-maso avokoa ny mpitandro filaminana sy ireo nifandray taminy rehetra.
Nefa efa feno 15 andro androany alarobia 25 marsa no nahatongavany teto Madagasikara, dia navela nandeha i Delmas Joseph Anthony, fa iandrasana ihany anefa ny valin'ny fitiliana izay tokony ho azo rahampitso.
Niakatra any Antananarivo avy hatrany ity tera-tany frantsay ity.
21 taona i Delmas Joseph Anthony, teraka tany Avignon Frantsa.